SexyBack nguJustin Timberlake - Izinto Zobugcisa
Uthetha ukuthini u-Justin Timberlake xa esithi ubuyisa isex? Ucacise kwi Umculo woMbonisi qho ngenyanga , NgoJulayi 2006: 'Ndinengxaki yokubiza iingoma zam. I-chorus nguJames Brown-ish kakhulu, ubize kwaye uphinde, 'njengoMatshini weSini.' Ndiyibhalile ukusuka phezulu kuye ezantsi. Ingoma yomzimba, eyenzelwe ukuvusa umdaniso wesondo. 'Umatshini wesini' sisalathiso esikufutshane. Ukuba uDavid Bowie ebengagubungela 'Umatshini Wokwabelana Ngesondo': 'Umvukeli Ovukelayo, unaye umama kwi-whirrrrl'. '
UTimberlake ubhale le ngoma kunye nabavelisi bakhe, iTimbaland kunye neNate 'Danja' Hills. Eli qela lisebenze kwiTimberlake's 'Ndikhaleleni Umlambo' kwaye lavelisa uNelly Furtado's 'Ukuziphatha okubi,' ebonisa i-cameo kaTimberlake kwividiyo.
Abaphulaphuli bachitha ixesha elininzi behlalutya amazwi ale ngoma. Ngokwenye ithiyori, imalunga nezenzo ze-S & M, kunye 'ne-Sexy Back' ukumakishwa ngasemva kwalowo ubethwayo. Eli candelo ngokukodwa libonisa ukuthembeka kule ithiyori:
Uyawabona lamakhamandela mntanam
Ndiza kukuvumela ukuba undibethe xa ndingaziphathi kakuhle
Kungenxa yokuba akukho mntu undenza ndizive ngale ndlela
Ukuyeka kule ngoma 'yiya' entloko, hamba nayo, 'kodwa uTimberlake wayesazi ukuba ifuna isihloko esingcono. Uye weza ne 'SexyBack,' kwaye wenza umgca wokuvula, 'Ndibuyisa' u-sexy back. '
'Ukubuya ngasemva' kubonakala kathathu kuphela kumkhondo, kodwa kuyabonakala ekuqaleni kwaye kwakhona esiphelweni, okwenza ukuba kungalibaleki. Ikwayisihloko esahlukileyo, esenza ibonakale.
UTimberlake wazisa uMichael Haussman ukuba akhokele ividiyo yomculo ngenxa yomsebenzi wakhe kwiMadonna's 'Thatha Isaphetha,' nefuthe elihlala lihleli kwimvumi. Uxelele iindaba zeMTV: 'Nanamhlanje, ndisazikhumbula izinto ezibonakalayo, imifanekiso, nendlela ayithimbe ngayo. Amaxesha amaninzi, uMadonna ubonakala ngathi ngoyena mntu ulawulayo, kwaye kuloo vidiyo, wayebonakala esengozini. Yayiyinto entle ukubona. '
Umboniso bhanya-bhanya wadutyulwa e-Barcelona ngaphezulu kweentsuku ezine, u-Elena Anaya ejongene noTimberlake njengempimpi eyimbangi yokuba ngumdla wakhe wothando.
Ukuthetha no Ukuzonwabisa ngeveki , U-Timberlake ubonge i-Thin White Duke njengenkuthazo yale ngoma. 'Bendimamele uninzi luka [David] Bowie ngelo xesha - Ukuqina kweZiggy kwaye Izinja zeDayimani -ndaye ndadlala 'uMvukeli Ovukelanayo' kaninzi-njalo, ngathi, amaxesha angama-15 ngosuku ngaphambi kokuba ndibhale nantoni na ethi 'SexyBack', utshilo.
'Besinomdla wokuthatha ezo zandi zintsha zamaza zenziwe ukuba zithandwe ngamaqela afana neenyembezi zoloyiko kunye noluntu kunye nokubona ukuba ingakanani i-R & B esingayongeza kweso sandi.' I-Timberlake yongezwa. 'Sifuna ukuthatha ezo zandi ze-synth kwaye sizenze zenziwe i-arpeggiated, phantse njengezinto eziqhelekileyo kwi-EDM ngoku.'
Ngokomculo, le ngoma yayingaphambi kwexesha layo, yayakhiwe kwizinto zomculo womdaniso we-elektroniki ngexesha apho yayihlobo lomculo. Isiseko yi-'ine-on-the-floor 'yokubetha efumaneka kwiingoma ze-disco: igubu lokukhaba libetha yonke into ebethwe ebharini. IDanja Hills yeza nombono wokusebenzisa ukubetha kule track.
Kukho ukuzazi okuthile kwingoma, njengoko kwiindawo ezahlukeneyo siva 'Yithathe uye kwibhulorho' kwaye 'Yiyise kwibhulorho' ukwazisa loo macandelo. Oku kugcina ingoma ilula kwaye ikwenza kucace ukuba ukwakhiwa kwengoma yindawo ephambili. UJames Brown wenze le nto kakhulu, uxelela iqela lakhe kunye nabaphulaphuli ukuba yintoni elandelayo.
UTimbaland uhlala ekongeza ukungenelela kwezwi kwiitraki awayezivelisile, kwaye uphezu kwayo yonke le nto, ngakumbi kwi-chorus apho athi, 'VIP' kunye 'neziselo kum.'
Inkampani erekhodayo kaTimberlake, uJive, icwangcise ukukhupha 'Uthando lwam' njengowokuqala ongatshatanga Ikamva leSondo: UthandoSounds , eyayiyicwecwe lakhe lesibini. UJustin wayesazi ngokusabela kwabasebenzi be studio ukuba 'u-Sexyback' uphumelele, ke watyhalela phambili ukuba ingoma ibe yeyokuqala kwaye angayeki. Ikhutshwe ngoJulayi 6, 2006, yafumana impendulo enkulu kwaye yafika kwi # 1 ngoSeptemba 9, apho yahlala iiveki ezisixhenxe. I-albhamu nayo yaya kwi # 1 yaza yathengisa ngaphezulu kweekopi ezizizigidi ezili-9, ibeka iTimberlake kolunye ugcino.
amazwi awayeki ukukholelwa ngohambo
lyrics kukuphela kwehlabathi
u-otis redding ehleli edokini yeengoma ze-bay
xa uthandana nomfazi omhle
U-elvis costello yintoni ehlekisa ngoxolo nothando kunye nokuqonda
kwindlela emnyama yasentlango yomoya opholileyo ezinweleni zam